Nadaafadda sanka ee dhallaanka | Bezzia
Nadaafadda sanka ee dhallaanka
Maria Jose Roldan | 05/09/2021 11:36 | Dhallaanka
Nadaafadda sanka ee dhallaanka waa hawl ay tahay in waalidku si taxaddar leh oo macaan leh u fuliyaan. Waxaa muhiim ah in si joogto ah loo fuliyo nadaafaddan, gaar ahaan marka ilmuhu calool -fadhiyo. Awood u lahaanshaha nadiifinta sanka waxay ka caawin kartaa ilmaha inuu si fiican u neefsado, wax fure u ah markay tahay inuu helo hurdada ugu fiican ee suurtogalka ah.
Maqaalka soo socda wax yar ayaan kaga hadli doonnaa nadaafadda sanka ee dhallaanka iyo tilmaamaha la raaco si loogu fuliyo sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
1 Goorta la sameeyo nadaafadda sanka ee dhallaanka
2 Tallaabooyinka marka la samaynayo nadaafadda sanka ee habboon dhallaanka
Goorta la sameeyo nadaafadda sanka ee dhallaanka
Nadaafadda noocaas ah waa in loo sameeyaa si joogto ah si meesha looga saaro xabka ugu badan ee suurtogalka ah loona nadiifiyo sanka. Haddii ay dhacdo in ilmuhu qabo hargab, waalidiintu waa inay si taxaddar leh u fuliyaan nadaafaddaas oo ay hubiyaan in midka yar uu neefsan karo sida ugu macquulsan. In la baabi'iyo xabka intii suurtogal ah ayaa iyaduna muhiim ah si qofka yar uusan u xanuunsan cudurrada qaarkood sida sanka -mareenka.
Marka laga reebo nadaafadda sanka, waalidiintu waxay dooran karaan inay qolka dhigaan qoyaan si ay u ilaaliyaan jawi qoyan oo ay uga fogaadaan saxmadda ilmaha sankiisa. Bilaha jiilaalka iyo kulaylka dartiis, bay'adu waxay noqotaa mid aad u qalalan saxmaduna way ka sii dari kartaa, sidaa darteed muhiimadda ay leedahay adeegsiga huurka.
Tallaabooyinka marka la samaynayo nadaafadda sanka ee habboon dhallaanka
Waxa ugu horreeya ee waalidku sameeyo waa inay ilmahooda jiifiyaan, dusha sare oo jilicsan oo raaxo leh. Waxa xiga ee waalidku u baahan yahay inay sameeyaan ayaa ah inay ilmahooda u nasiyaan intii suurtogal ah. Si taas loo sameeyo, waxaa wanaagsan inaad hesho kaalmada lamaanahaaga ama qof kale.
Markaa waa inay ku daraan dhowr dhibcood oo ah xal saline labada sanka. Serumku wuxuu caawiyaa in la baabi'iyo xabka soo ururay oo sidan loo hubiyo in kan yari si fiican u neefsan karo. Marka laga reebo serum -ka, waalidiintu waxay kaloo isticmaali karaan xalka cusbada leh taasi waxay kaa caawineysaa inaad si fiican u nadiifiso sanka.
Soo -kiciyaha caanka ah ayaa inta badan muran dhaliya waxaana lagu talinayaa oo keliya in la isticmaalo haddii ay dhacdo in xabku aad muhiim u yahay. Waa inaad aad u taxaddartaa markaad isticmaaleyso maxaa yeelay haddii si lama filaan ah loo isticmaalo, waxay sababi kartaa dhaawacyo dhegaha sida otitis -ka. Sikastaba, khubaradu waxay ku taliyaan adeegsiga serum -ka mar kasta iyo meel kasta oo ay suurtagal tahay.
Marka la soo koobo, nadaafadda sanku aad bay muhiim u tahay bilaha ugu horreeya nolosha ilmaha. Sidaan hore u soo sheegnay, waa wax ay tahay in si taxaddar leh loo sameeyo si looga fogaado in cunuggu aad u walwalsan yahay. Nadaafadda waa in la sameeyaa iyada oo ilmuhu gebi ahaanba dabacsan yahay oo lagu dabaqo inta badan kiisaska, serum -ka jirka ama xalka milixda. Ciriiriga dhallaanka waa wax caadi ahSidaa darteed muhiimadda nadaafadda wanaagsan si meesha looga saaro xabka xad -dhaafka ah ee ka yimaada marinnada sanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Hooyooyinka » Dhallaanka » Nadaafadda sanka ee dhallaanka
Sida loo ogaado haddii aad tahay qof dhammaystiran
Maraq digaag leh basbaas cas iyo yicib